Al Shabaab Oo Weerar Xooggan ku qaaday deegaanka Daynuunaay Ee Gobolka Baay.
Saturday August 17, 2019 - 09:41:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaallo xooggan ayaa saaka aroortii ka qarxay saldhig melleteri oo kuyaal deegaan kaabiga ku haya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa xaqiijinaya in ciidamada Al Shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka Daynuunaay oo qiyaastii 25 Km ujira magaalada Baydhabo.
Wariye ku sugan gobolka Baay ayaa soo sheegay in dagaal culus uu deegaanka ku dhaxmaray ciidamada Al Shabaab iyo maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed, fagtii hore ee dagaalka ayay Al Shabaab usuurtagashay in ay la wareegeen gacan ku heynta Daynuunaay.
Maleeshiyaadka maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhowr jeer qaaday weeraro ay dib ugu qabsanayaan deegaanka Daynuunaay balse xoogaga Al Shabaab ayaa si adag isaga difaacat, ilo wareedyo ayaa sheegaya in khasaara dhimasho iyo dhaawac ah uu gaaray ciidamada la weeraray.
Ciidamada Al Shabaab ayaa saldhigga Melleteri ee Daynuunaay ka daabushay sahay kala duwan oo halkaas u tiillay maleeshiyaadka maamulka uu madaxda ka yahay Cabdi Caziiz Lafta gareen.
War lagasii daayay idaacadda Andalus ee Afka Xarakada Al Shabaab ku hadasha ayaa lagu sheegay ‘in Mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanada Daynuunaay kadib duullaan culus oo ay saaka kula jarmaadeen murtadiinta’ sidaas ayaa lagu lagu baahiyay Andalus.
Ma ahan markii ugu horraysay oo Al Shabaab ay weerar ku qabsadaan deegaanka Daynuunaay, sanaddii 2018 ayay ciidamada Al Shabaab sidaan oo kale ula wareegeen deegaanka iyagoo muddo ku dhow bil maamulayay waloow markii dambe ay dib uga gurteen.